महासंघलार्इ पीडित व्यवसायीहरुको आवाज सम्बोधन गर्ने साझा मन्च बनाउँदैछाैं : अध्यक्ष कटुवाल-Setoghar
महासंघलार्इ पीडित व्यवसायीहरुको आवाज सम्बोधन गर्ने साझा मन्च बनाउँदैछाैं : अध्यक्ष कटुवाल
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल
नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका साना तथा मझाैला उद्योगी तथा व्यवसायीकाे अावाज अहिले सम्म सञ्चालनमा रहेका अन्य व्यावसायिक संघहरुले सम्बाेधन गर्न नसकेकाे कारण अाफूहरूले संगठित भएर नयाँ महासंघको स्थापना गर्नुपरेकाे नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल बताउनुहुन्छ । महासंघ स्थापना गर्नु आफूहरुको रहर नभई बाध्यता भएको समेत ऊहाँले बताउनुभयाे । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष कटुवाल सँग रहेर गरिएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश ः
उद्योगी व्यवासयीहरुलाई समेटेर नयाँ महासंघ स्थापना गर्नुभयो, किन र कसरी महासंघ अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो ?
यस भन्दा पहिले नेपालमा निकै लामो इतिहास बोकेका संघ तथा महासंघहरुले हाम्रा मुद्धालाई उठान गर्न र सम्बोधन गर्न नसकेको कारण हामीले बाध्य भएर यो महासंघको स्थापना गरेका हौं । नेपालमा हामीले महासंघलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउनको निम्ति पनि निकै लामो सङ्घर्ष र उतारचढाव व्यहोर्नुप¥यो । हाम्रो निम्ति अवसर र चुनौती दुवै छन् । अहिले हामीसँग कोटेश्वर, बानेश्वर, वौद्ध, भक्तपुर, ललितपुर लगायतका विभिन्न क्षेत्रका १८ ओटा व्यावसायिक संगठनहरु संलग्न छन् ।
साना तथा मझौला व्यवसायीहरुका मुद्धाहरुलाई एकीत्रित रुपमा अघी बढाउनको निम्ति हामीले महासंघबाट विशेष भूमीका निर्वाह गर्नेछौं । अहिले नेपालमा विभिन्न राजनीतिक उतारचढावहरु आएका भएपनि व्यवसायीहरुलाई भने ढुक्कले गरिखाने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरुका समस्याहरु समाधानको निम्ति व्यवसायीहरु एकजुट हुनुको विकल्प नै छैन ।
व्यवसायीहरुको हकहितको लागि अब तपाईंहरु कसरी अघी बढ्नुहुन्छ ?
अहिले सम्म साना तथा मझौला लगानीमा व्यवसायीहरु आवद्ध रहेका संघहरुको आवाज नेपालका नीतिगत तहका निकायहरुमा पुग्न सकेन । यस्तो अवस्थामा साना हामी व्यवसायीहरु एकजुट हुन सकेमात्र हामीले सम्बन्धित निकायलाई दबाब सृजना गर्न सक्छौंं । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले हाम्रो आवाजलाई बुलन्द बनाउनको निम्ति हाम्रा गतिविधिहरु अघी बढाउनेछौं ।
हामीले फरक–फरक क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई समेट्नको निम्ति कार्यसमिति भित्रकै व्यक्तिहरुलाई फरक–फरक भूमीका र जिम्मेवारी दिएर आफ्नोे जिम्मेवारीको क्षेत्रमा जिम्मेवार बन्ने तवरले परिचालन गर्छौं । कस्ता समस्यालाई कहाँबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, ती सबैलाई त्यसै मान्यता बमोजिम हामी अघी बढ्छौं ।
तपाईंहरुको महासंघमा भएका सबै संघहरुका समस्या एकै किसिमका छैनन् । यस्तो अवस्थामा केही जटिलताहरु त अवश्यक होलान् नि ?
अहिले सम्म हाम्रो महासंघ अन्तरगत भएका १८ ओटा संघहरुका आ–आफ्ना समस्याहरु सबै एकै किसिमका त छैनन् । तर हाम्रो संघ मध्यमस्तरीय व्यवसायीहरुको संघ भएको कारण आधारभूत रुपमा हाम्रा समस्याहरु मिल्दाजुल्दा नै हुन्छन् । साथै हाम्रो महासंघमा सबै संघबाट प्रतिनिधित्व पनि भएको छ । यसकारण हाम्रो महासंघले हाम्रा सदस्य व्यवसायीहरुका समस्या समाधानको निम्ति भरपूर सहयोग गर्नेछ । साथै हामी सामुहिक रुपमा अघी बढ्न तयार छौं । हामी हाम्रा मुद्धाहरुलाई अल्पकालिन र दीर्घकालिन नीति तथा योजनाको आधारमा सोही बमोजिम समाधानको निम्ति निरन्तर रुपमा पहल गरिनै रहनेछौं । यसको निम्ति हामीले फरक–फरक क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई समेट्नको निम्ति कार्यसमिति भित्रकै व्यक्तिहरुलाई फरक–फरक भूमीका र जिम्मेवारी दिएर आफ्नोे जिम्मेवारीको क्षेत्रमा जिम्मेवार बन्ने तवरले परिचालन गर्छौं । कस्ता समस्यालाई कहाँबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, ती सबैलाई त्यसै मान्यता बमोजिम हामी अघी बढ्छौं ।
महासंघमा आवद्ध अधिकांश व्यवसायीको मुख्य समस्याको रुपमा भन्सार नै रहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने काम तत्काल गर्नु जरुरी छ ।, भन्सारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा हामी व्यवसायीहरु निकै ठूलो समस्यामा परेका छौं ।
यसैगरी अहिले काठमाडौंमा बस्ने व्यवसायीहरुको अलावा सम्पूर्ण वहालवालाहरु घरवहालकै कारण ठूलो समस्यामा छन् । यस्तो अवस्थामा सबै वहालवालाहरुलाई सम्बोधन हुनेगरीे काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले नेपालमा घरवाला र भाडावालहरु बीच यदाकदा बाहेक आपसी सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सकेको समेत पाईंदैन । यसलाई सुधार्न जरुरी छ ।
महासंघको अबको कार्यदिशा के हुन्छ ?
नेपालमा हाम्रो महासंघ अहिले पनि निकै ठूलो छ । यसमा १० औं हजार व्यवसायीहरु आवद्ध रहनुभएको छ । यसको आकार अझै बढ्दै जानेछ । साथै यस नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले अब के काम गर्ने भन्ने बारे आधारभूत रुपमा त पहिले पनि छलफल भई निर्णय भएको छ । हामी पहिले नै छलफल भएर निकालिएका ती विषयवस्तुहरुको जगमा रहेर महासंघका गतिविधिहरु अघी बढाउँछौं । यो महासंघ एकदमै पीडित र पिसोलिएका व्यवसायीहरुको सामुहिक आवाजहरुको सम्बोधन गर्नको निम्ति नै स्थापना भएको कारण अनवरत रुपमा निरन्तर रुपमा विभिन्न किसिमका गतिविधिहरुमा केन्द्रित भइरहनेछ ।
कस्ता व्यवसायीहरु हाम्रो महासंघमा समेटिनुभएको छ ?
हाम्रो यस महासंघमा देशभरबाट व्यापार, व्यवसायको निम्ति काठमाडौं आउनुभएका व्यक्तिहरु नै संलग्न हुनुहुन्छ । हाम्रो यस महासंघमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका मलहरु, क्षेत्रगत व्यवसायीहरु, खासगरी तयारी वस्तु उत्पादक तथा विक्रेताहरु, कस्मेटिक, रेडिमेट क्षेत्र लगायतका व्यवसायीहरु निकै ठूलो सङ्ख्यामा आवद्ध हुनुहुन्छ ।
व्यवसायीहरुका समस्याहरुलाई समाधानको निम्ति प्राथमिकता तय गरेर नै अघी बढ्दै हुनुहुन्छ होला नि ?
तत्काल हाम्रो महासंघमा आवद्ध अधिकांश व्यवसायीको मुख्य समस्याको रुपमा भन्सार नै रहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने काम तत्काल गर्नु जरुरी छ ।, भन्सारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा हामी व्यवसायीहरु निकै ठूलो समस्यामा परेका छौं ।
तेस्रो महत्वपूर्ण भनेको नेपाल सरकारले नेपालमा २० बर्ष सरकारी सेवामा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरुको निम्ति अवकाश पश्चात्को लागि निश्चित् पेन्सनको व्यवस्था गर्दै आएको छ । तर हामी व्यवसायीहरुले २०-२५ बर्ष राज्यलाई निरन्तर रुपमा आफ्नो व्यवसायबाट कर तथा राजस्व तिर्दै आएका छौं । हामी प्रति बुढेसकालको लागि हामीलाई राज्यबाट के सुविधा प्रदान गरिएको छ त ? के हामीले हाम्रो व्यवसायबाट विश्राम लिएको दिन राज्यले प्रदान गर्ने मासिक २ हजार भत्तामा नै चित्त बुझाउनुपर्ने हो त ? कि त हामीलाई राज्यले अन्य केही व्यवस्था गर्न सक्छ ? यो हामीले सम्बोधनको निम्ति दबाब दिनुपर्ने अर्को विषय हो ।
अर्को समस्या भनेको धुलोधुवाँ पनि हो । अहिले काठमाडौंमा सडक छेउमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरु धुलोधुवाँ लगायतका विभिन्न समस्याहरुकबाट पीडित छौं । एकैदिनमा नै हामीले निकै ठूलो परिमाणमा धुलो ग्रहण गर्नुपरेको छ । राज्यलाई कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्यमा यसरी खेलवाड गर्न पाउने अधिकार छैन । नेपाली नागरिकहरुको स्वास्थ्य माथि राज्य खेलिरहेको छ । यसलाई समेत तत्काल सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यसबाट हामी व्यवसायीहरुले राज्यलाई पु¥याउँदै आएको सहयोगको पनि उचित मूल्याङ्कन हुने गरी दवाव सृजना हुनेमा हामी आशावादी छौं । हामीले राखेका मागहरु निकै गम्भीर छन् । बाहिरबाट हेर्दा हाम्रा मागहरु सामान्य नै लाग्न सक्छन् । तर यी मागहरु सम्बोधान गर्न नसकिएको अवस्थामा भविष्यमा निकै गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छ ।
कर सम्बन्धमा पनि व्यवसायीहरु असन्तुष्ट देखिन्छन् नि । यसो हुनुको कारण के हो ?
नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिहरुको निम्ति व्यावसायिक तथा कर शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । व्यक्तिलाई व्यवसायमा आउनुपूर्व नै यस्तो शिक्षा पहिले प्रदान गर्न सकेको खण्डमा मात्र व्यवसायीले राज्यका नीतिमा रहेर राम्रो तवरले व्यवसाय गर्न सक्छ । राज्यले पहिले व्यावसायिक शिक्षा नदिने पछि कहीँ कुनै गढबढी भएको खण्डमा उक्त व्यवसायीलाई कालोबजारी गरेको आरोप लगाउने काम कत्तिको न्यायपूर्ण छ ? यसमा राज्य पनि गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
कि त राज्यले आफ्ना सबै नीतिहरुको बारेमा सबै व्यवसायीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा शिक्षा प्रदान गर्न सक्नुप¥यो । होइन प्रभाकारी रुपमा त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छैन अर्थात राज्यबाट पनि केही कमजोरी भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा व्यवसायीलाई मात्रै दोषी देखाएर उसलाई जेल हाल्ने काम कत्तिको न्यायपूर्ण हुन सक्छ ? राज्यले पनि सोच्नु जरुरी छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालमा नियमित शिक्षाको रुपमा पाठ्यक्रममा नै व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम समेत समेटिनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । जुन राज्यको दीर्घकालिन नीतिमा पर्ने कुरा हुन सक्छ । यद्यपि तत्काल दर्ता भएर सञ्चालनमा आउन चाहने व्यक्तिहरुलाई भने व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा उसको भूमीका के हुने भन्ने सम्बन्धमा अनिवार्य रुपमा प्रशिक्षित गर्नु जरुरी छ । अहिले व्यवसायमा आउन चाहने नयाँ व्यवसायीहरु राज्यका न्यूनतम नीतिविधिहरुको बारेमा जानकार हुन नसक्दा निकै ठूलो समस्यामा परेका छन् । यसलाई राज्यले पनि गम्भीर रुपमा लिनु जरुरी छ । राज्यका सबै नीतिहरुको बारेमा जानकारी भएका व्यक्तिहरु मात्र व्यवसाय सञ्चालनमा आउन उपयुक्त हुन सक्छन् भन्ने कुरा राज्यले समेत सम्बन्धित व्यवसायीहरुलाई बुझाउनु जरुरी छ । साथै राज्यले आफ्ना नीतिबारे सबैलाई जानकार बनाउन सकेको खण्डमा मात्र राज्यका त्यस्ता नीतिहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुन्छ ।
त्यसो भए राज्यलाई दबाब दिएरै आफ्नो पक्षमा काम गर्न बाध्य पार्ने तपाईंहरुको योजना हो त ?
व्यवसायीहरुका विविध समस्याहरुका बीच जन्मिएको यस महासंघले हाम्रा यी गतिविधिहरुलाई पहिलो चरणमा यसरी दबाबमूलक रुपमा नै अघी बढाउनेछ । जसरी हिजोका दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्याहरुलाई लिएर डाक्टर गोविन्द केसीले माहोल तताउनुभयो । त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रा समस्याहरुलाई लिएर जनताहरुलाई समेतन सुसुचित र जागरुक बन्ने गरी काममा प्रभावकारी भूमीका निर्वाह गर्नेछौं ।
नेपालमा तपाईंहरुले कुन-कुन मुख्य उद्धेश्यले यस महासंघको स्थापना गर्नुभएको छ, संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा ?
अहिले नेपालमा हाम्रो महासंघमा १८ ओटा संघहरु समेटिएका छन् । हामीसँग एकैपटक १० औं हजार व्यवसायीहरु एकजुट भएका छन् । एकैपटक निकै ठूलो सङ्ख्याको विशाल सभा सञ्चालन गर्नु त्यत्ति सहज भने पक्कै थिएन । हाम्रो भित्रबाट नै आफैं बुलन्दित बनेको आवाजलाई एकीकृत गर्दै संस्थाको नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी म सहितको टीमलाई दिइएको छ । यसको लागि हामी निरन्तर रुपमा लागिरहनु जरुरी छ ।
अहिले पनि नेपालका राज्यका नीतिनियमहरु स्वत स्फूर्त रुपमा चल्न सकेका छैनन् । कहीँ न कहीँ विचौलियाप्रथा छ । यसलाई अन्त्य गर्न सकेको खण्डमा मात्र नेपालमा व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरु सबैलाई सहजता हुन सक्छ । हामीले त्यस कुरालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राख्नेछौं ।
अन्त्यमा तपाईंले के भन्नुहुन्छ ?
नेपालमा अहिले युवाहरु अवसरको निम्ति दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा विदेशिइरहेका छन् । नेपालमा पनि युवाहरुको निम्ति राम्रो अवसर र रोजगारीका सम्भावनाहरु नभएका होइनन् । तर राज्यका केही नीतिगत, कानुनी, सुरक्षा लगायतका समस्याको कारण यहाँ काम गर्ने विश्वासयुक्त वातावरण बन्न सकेको छैन । आगामी दिनमा त्यस किसिमको वातावरण तयार गर्ने कार्यमा नेपाली युवाहरु नै लाग्नुपर्छ । नेपालमा नै सम्भावना खोज्नुपर्छ । हामी पनि त्यही मान्यतामा छौं ।
अहिले त मुलुक नै समस्याको जगमा छ । नयाँ सरकार बनिसकेको अहिलेको अवस्थामा मुलुक अब राजनीतिक रुपमा स्थिरतामा जानेछ । मुलुकले परिवर्तनको काँचुली फेर्न सकेको खण्डमा यहाँ काम गर्न सहज वातावरण बन्नेछ । जसले गर्दा छिट्टै हामी व्यवसायीहरुका समस्या पनि समाधान हुँदै जानेछन् । हामी नेपाल सरकारसँग हातेमालो गरेर नै हाम्रा गतिविधिहरुलाई अघी बढाउन चाहन्छौं ।